Movement against cryptocurrencies. Ecology kana kubatana? | Linux Addicts
Movement against cryptocurrencies. Ecology kana kubatana?
Vazhinji vedu tagara tichishoropodza Mozilla Foundation nekuda kwekuda kuita zvezvematongerwo enyika pane kugadzira browser yakanaka. Kusvika parizvino hapana zvabuda. Zvisinei, zviri nani kuti mumwe munhu aite kapfungwa kadiki kekukanganisa kwezvematongerwo enyika kuti iwe upindure nekukasika.
1 Mufambiro unopesana ne cryptocurrencies
2 Inonzwika zvakanaka pakutanga
3 A bit of conpiracy theories
Mufambiro unopesana ne cryptocurrencies
Izvo zvese zvakatanga apo pazuva rekupedzisira regore nheyo yakadhinda:
Unoshandisa @dogecoin? Iwe unayo #Bitcoin neEthereum? Tiri kushandisa @BitPay kugamuchira #cryptocurrency mipiro.
Hi, ndine chokwadi kuti munhu ari kumhanyisa account iyi haazive kuti ndini ani, asi ndakawana
@mozilla uye ndiri pano kuti nditi fuck 'em uye fuck izvi. Munhu wose anobatanidzwa mubasa racho anofanira kunyara nechisarudzo ichi chekubatana nevanoparadza nyika-Ponzi schemers.
Kuti mumwe munhu anga asiri mumwe kunze kwaJamie "jwz" Zawinski, mumwe wevagadziri veNetscape browser uye co-muvambi weMozilla chirongwa.
Zvadaro, imwe nhoroondo yakabuda kuzomutsigira:
Mhoro @mozilla, ndinofungidzira kuti haundizivewo, asi ndakagadzira Gecko, injini yebrowser yako yakavakirwa pairi. Uye ndiri 100% ne @jwz pane izvi.
Izvozvo. Iwo chaiwo. Fuck.
Wakange wakarongerwa kuti uri nani pane izvi.
Somugumisiro, vhiki gare gare, nheyo yakashandura chisarudzo chayo:
Kubva nhasi tiri kuongorora kuti uye sei mutemo wedu wazvino wezvipo zvecryptocurrency unoenderana nezvinangwa zvedu zvemamiriro ekunze. Uye isu tichiita ongororo yedu isu tichambomira kugona kupa cryptocurrencies.
Muna Chivabvu wegore rapfuura, Elon Musk akazivisa kuti kambani yake Tesla yaizomira kubvuma Bitcoins senzira yekubhadhara nekuda kwekukanganisa kwayo kwezvakatipoteredza, pazuva rimwe chete iro sangano rezvemagariro eGreenpeace rakatora chiyero chimwe chete maererano nezvipo.
Kufemerwa nechisarudzo cheMozilla, Wikipedia mupepeti GorillaWarfare akavhura chikumbiro chekutaura pamusoro peWikimedia meta-wiki ichidaidzira kuti sangano rimire kubvuma zvipo zvecryptocurrency,
Inonzwika zvakanaka pakutanga
Pakutanga kuona munhu anogona kunzwira tsitsi vatsoropodzi. Zawinski iye mushori weBitcoin uye mamwe macryptocurrencies kubvira zvisati zvave mufashoni.
Dambudziko reecology harina kupokana, Bitcoin migodhi inodya inenge 0,5% yesimba renyika, chimwe chinhu chakaenzana neGoogle sere. Kutengeserana kwega kwega kunoitwa neBitcoin kunopedza simba rakafanana neavhareji yemba yekuAmerica mukati memazuva makumi manomwe nesere, kureva mwedzi miviri nehafu.
Kumwe kutsoropodza kune chekuita nekuvimbika.
Chirongwa chePonzi imhando yehutsotsi apo matsotsi anoba mari kubva kune vanoisa mari uye vanovhara humbavha kuburikidza nekuita purofiti kune vatengi kubva mumari inopihwa nevatsva vanoisa mari.. Dzimwe nyanzvi dzezvehupfumi dzinotenda kuti kukwira kwemitengo ndeyekukwezva vatengesi vadiki vanove ivo vanozorasikirwa nekurasikirwa kana imwe midziyo ikatora mubereko kana kuti hurumende dzinotora danho mukuona mari yekristpto ine njodzi.
A bit of conpiracy theories
Avo vedu vakakurira mumaXNUMX namaXNUMX vanorangarira kushora kukuru kwamapoka emhoteredzo kusimba renyukireya. Kunyangwe tsaona yeChernobyl yakaitika munyika yemakominisiti ine zvishoma zvakatipoteredza uye kuchengetedza zvinodiwa, yakashandiswa sechikonzero chekumanikidza vezvematongerwo enyika venguva iyoyo kuti vaparadze kumadokero. Somugumisiro, nhasi zvakawanda zveEurope zvinoenderana negasi kubva kuRussia. Uye, simba renyukireya rinoonekwa se "girinhi".
zvakanaka kushamisika kana iyo yezvakatipoteredza inorwisa cryptocurrencies isingavanze rima vavariro dzakavanzwa sevavariro dzakanaka. Kana shure kwavo havasi vezvematongerwo enyika uye masangano emari
Cryptocurrencies inobvumira vanhu kuita kutengeserana zviri nyore uye pasina bureaucracy. Kukosha kwayo hakusi pasi pekuda kwevezvematongerwo enyika sezvo nzira yekuburitsa inodzorwa nealgorithm UYE iyo blockchain tekinoroji inochengetedza kutengeserana.
Tekinoroji itsva yese inopedza simba rakawanda. IInternet inoshandisa zvakanyanya kudarika network yenhare. Mota uye njanji idambudziko rehupfumi zvichienzaniswa nemabhiza nemombe. Ndiwo mutengo wekufambira mberi.
IInternet yaive nebubble rayo mukupera kwemaXNUMX uye mamirioni avanhu akarasikirwa nemari. Nekudaro, isu hatina kuramba Indaneti uye, nekukanganisa kwayo, yakasununguka uye yakawanda inobatanidzwa yakavakwa. Isu tinofanira kuita zvimwe chete ne cryptocurrencies.
Nzira mbiri dzinobvira dzingava dzekuzvitonga dzemitengo yekutsinhana uye nzira yemigodhi inodzivirira zvikwata zvikuru kubva kune zvakanakira.
Iwe unogona kufunga kuti sangano rakanangana nekuita kuti webhu ive nani inofanirwa kufunga nezvekubatsira kuita cryptocurrencies zviri nani sechinangwa pane kuve nezvinangwa zvemamiriro ekunze. Asi, iyo Mozilla Foundation iri mune chimwe chinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Movement against cryptocurrencies. Ecology kana kubatana?
Diego Corrientes akadaro
Ini ndinofunga kuti mune ino blog yenyika yelinux, ivo vari nani pakutaura nezve software pane zvezvematongerwo enyika. Ini ndinofunga ivo vanodzora zvakawanda nezveLinux, asi zvishoma nezvezvematongerwo enyika ecology. Cryptocurrencies zviridzwa zvekufungidzira uye tekinoroji zvishandiso pasevhisi yekusaenzana uye yakanyanya kupamba capitalism. Kune izvi tinofanira kuwedzera kutyisa kwayo kwe ecology. Isu tinofanirwa kukorokotedza Mozilla Foundation nesarudzo yavo. Nokuda kwemaonero anokosha ehukama pakati pevanhu uye teknolojia, ndinokurudzira vanyori vakadai saEvgeny Morozov kana Marta Peirano.
Pindura kuna Diego Corrientes
zvematongerwo enyika ecology?
Mhosva inozorora, kukudzwa kwako.
Ndinotaura zvakafanana nemazita ako, ecology yezvematongerwo enyika? Chii gehena ravanogadzira, kune zvematongerwo enyika uye ecology, HAZVIKONANI kusanganiswa, asi mhedzisiro ndeye Climate Summit, marara asina basa, hapana anoremekedza, boka diki chete rinoenda kunoita mamwe ma gala party uye kuvimbisa zvinhu zvisingatendeseki Munoziva. chii chimwe
Dai zvematongerwo enyika vakateerera kune ecology, vangadai vakazvipfura ivo pachavo kare nekuda kwezvakanaka zvepasi, ndapota, chii chekuverenga ...
predatory capitalism? Ndinoda kuona kuti Mozilla haisi capitalist, kana ikatora nguva refu
Zvirinani macryptos ari kutengeserana ega nevega, kana vakarasikirwa, ivo vanove varidzi kana vatengesi, hapana mumwe munhu.
Ecological kukanganisa, zvakanaka, ndinovimba kuti Mozilla ine hunhu sekusava nekukanganisa kwezvakatipoteredza nemaseva ayo, izvo zvandisina chokwadi nazvo.
Hahaha, sei cryptocurrencies ichave capitalist uye kusaenzana zvinhu? Kutanga, kutanga kwayo, kubva kune cypherpunk uye crypto-anarchist line, ndinovimba wakaverenga usati wataura kuti chinhu che capitalist ... Chechipiri, nhoroondo, iwe hauna kuona kuendeswa kwehupfumi kune nerds uye geeks vari tichitsvaga nyika yakasiyana?mikana yekurwisa inflation yainopa kune vakatorerwa minda. Ndinofunga kuti anti-crypto nhau iri kudya huropi hwakawanda. Iva wakasununguka, iva anarchists, gadzira yako wega sisitimu, uchishandisa yakavhurika-sosi blockchain, gadzira nyika nyowani, uye rega kutaura zvisina musoro uchipokana ne crypto. Chekupedzisira, shandisa Algorand Blockchain iri kabhoni NEGATIVE, hongu isina kunaka. Ngationei kana izvozvo zvichichinja pfungwa dzavo.
OIN inowedzera katalog yayo yepatent ne337 mapakeji matsva